Ny Fanahy no mahavelona
"Ny fanahy no mahavelona; ny nofo tsy mahasoa na inona na inona; ny teny izay nolazaiko taminareo dia fanahy sy fiainana" - Jao. 6:63.
Ny Fanahy Masin'Andriamanitra no hany afaka mamoha ny fahafahan'ny saintsika mahatakatra zavatra. — L 49, 1896
Ireo izay miandry amim-panetren-tena an'i Jehôvah, sy mangataka ny fitarihany sy ny fahasoavany ihany no homena ny Fanahy. Izany fanomezana nampanantenaina izany, izay raisina amin'ny alalan'ny finoana, no mitarika ny fitahiana hafa rehetra. Araka ny haren'ny fahasoavan'i Kristy no hanomezana izany, ary vonona Izy ny hanome ho an'ny fanahy tsirairay, araka izay fahafahany mandray.
Ny fizarana ny Fanahy dia fizarana ny fiainan'i Kristy. Ireo izay mianatra amin'Andriamanitra toy izany ihany, ireo izay iasan'ny Fanahy eo amin'ny fiainany ihany, ary ireo izay maneho ny fiainan'i Kristy eo amin'ny fiainany ihany, no afaka mijoro ho solontenan'ny Mpamonjy.
[...] Ny Fanahin'Andriamanitra, rehefa raisina ao amin'ny fanahy, dia mamelombelona ny fahafaha-manaony rehetra. Mivelatra amim-pirindrana ny saina izay voatolotra manontolo ho an'Andriamanitra, eo ambany fitarihan'ny Fanahy Masina. Ary atanjahina mba hahatakatra sy hahatanteraka izay takin'Andriamanitra koa izany saina izany. Lasa matanjaka sy miorina tsara ny toetra izay nalemy sy nangozohozo. Manorina fifandraisana ety dia ety tokoa eo amin'i Jesôsy sy ny mpianany ny fanoloran-tena tsy tapaka Aminy, ka tonga manahaka ny an'ny Tompony ny toetry ny Kristianina. Manjary manana fomba fijery mazava sy mivelatra kokoa izy. Mahatakatra lalina kokoa ny sainy, ary mahay mandanjalanja kokoa izy. Velombelona tokoa izy noho ny herin'ilay Masoandron'ny Fahamarinana ka manjary mamoa be ho voninahitr'Andriamanitra. — GW, 285,286.
Hiray fo sy saina ny mpino, ary homen'ny Tompo hery ny Teniny izay torina eo amin'izao tontolo izao. Ho tafiditra any amin'ny tanan-dehibe sy tanana vaovao ny hafatra. Hitsangana sy hihazava ny fiangonana, satria tonga ny fahazavany ary ny voninahitr'Andriamanitra efa miposaka aminy (...) Raha monina ao anatintsika ny Fanahy Masina, (...) dia hanandratra an'i Kristy isika. — RH, 23 Martsa 1890.